Usain Bolt ma ku biiri doonaa Manchester United? - BBC News Somali
Usain Bolt ma ku biiri doonaa Manchester United?
Image caption Usain Bolt mucjisadii orodka adduunka
Orodyahanka caanka ah ee Usain Bolt ee u dhashay dalka Jamaica ee ciyaaraha orodada ka fariisanaya ayaa sheegey in uu macsalaameynayo wax kasta kadib tartankii ugu dambeeyey ee uu kaga qeybgalay London.
Balse halkee ku dambeyn doonaa orodyahanka caanka ah?
Bolt oo horyaalka orodada adduunka qaaday 8 jeer ayaa ciyaaraha ka fariisanaya isaga oo 30 jir.
"Runtii waa arrin murugo leh in aan ka tagayo garoomada, waxaan macsalaameeyey taageereyaashayda, iyo xitaa garoomada" ayuu yiri Bolt.
Mar wax laga weeydiiyey in uu dib ugu soo laabanayo tartamada ayuu yiri "Waan arkay dad badan oo inta shaqada ka fariisteen haddane dib ugu soo laabtay, balse magacooda ayay haleeyeen".
Bolt ayaa tartankiisii ugu dambeeyey kaliya ka heley billad naxaas ah, wuxuuna orodka 100m dhamaystey isaga oo dhaawacan.
Bolt ayaa lala barbar dhigey halyeeyadii caanka ahaa ee isboortiga sida Maxamed Cali Kalaay, waxaana lagu tilmaamay qof isaga oo kale ay dhif iyo naadir tahay in uu adduunka soo maro.
"Waan xusuustaa markii aan ku guuldaraystey orodka 100m, qof ayaa igu yiri Usain, ha walwalin, Maxamed Cali Kalaay ba waa uu ku guuldaraystey tartankiisii feerka ee ugu dambeeyey" ayuu yiri Bolt.
Bolt ma aadi doonaa kooxda Manchester United ?
Hal fursad oo ugu dambeysa ayaa laga yaabaa in ay soo marto Bolt.
Wadahadalo ayaa muddo bilo ah u socdey Usain Bolt iyo kooxda kubbada cagta ee Manchester United, oo ku saabsan in uu Bolt ka dheelo ciyaaraha qaar ee Man U , gaar ahaan ciyaarta dhexmari doonta Manchester United iyo Barcelona, kana dhici doonta garoonka old Trafford 2-da bisha September.
Balse kasoo muuqashadiisa ciyaartaas waxa ay ku xirantahay hadba sida uu oga soo kabsado dhaawiciisa.
Bolt ayaa ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee Man U, wuxuuna bishii hore soo wacay barnaamij ka baxa taleefishin ay kooxda leedahay, halkaasi oo ammaan balaaran uga jeediyey kooxda, inkasta oo daadihiyeyaasha barnaamijka aysan ka warqabin qofka soo wacaya.